အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီးမော်ကွန်း - ထို rayhab
Homeတူရကီအရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး
အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီးရထားလမ်း, မြို့လမ်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုသတင်းဖတ်ရှုဖို့မြေပုံပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ!
Malatya အတွက် emitting ဦးစားပေး
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအားဖြင့်တစ်နှစ် 2019 "လမ်းသွားလမ်းလာဦးစားပေးယာဉ်အသွားအလာများ Year" ၏ Malatya မြူနီစီပယ်ကြေညာချက်ပြီးနောက်အချက်များအတွက်ယာဉ်မောင်းသူတို့ရှေ့မှောက်၌လုပ်နေတာလုပ်ကိုင်ဖို့လူကူးအသိအမြင်နှင့်ကျောင်းခရိုင်အသွားအလာ၏ဖန်တီးမှုအဘို့မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ပြင်းထန်သောမော်တော်ယာဉ်အသွားအလာဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
EBUAŞကားမောင်းသူ 120 အီးယူစံချိန်စံညွှန်းများပေါ်တွင်လေ့ကျင့်ရေးပေးစတင်ခဲ့သည်။ xnumx'şနာရီသင်တန်း, ကျွမ်းကျင်မှု, အမျက်ဒေါသထိန်းချုပ်အတွင်းပထမဆုံးအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်ရေးဆွေးနွေးကျေနပ်မှုခဲ့ကြသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတသင်တန်းဆရာနှင့်ကမ္ဘာပညာရှင်တူရကီ Atakan Stars နှင့်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးသင်တန်းပေးယောဘ၏တည်ထောင်သူ [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးElazığမြူနီစီပယ်သည်လေးရက်ကြာအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုမပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Elazig မြူနီစီပယ်၏မနက်စောစော Al-Adha ခံရသောပွဲစဉ်အတွင်းငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်အဆင်ပြေဘဝအထောက်အကူပြုရန်နိုင်ငံသားများ၏မြူနီစီပယ်ဖြင့်ကြေညာချက်ထဲမှာ Elazig [ပို ... ]
Malatya မြို့တော်ဝန် Selahattin Gürkan, ထိုရပ်ကွက်Cevatpaşa (နောက်ကွယ်မှာအနီးကပ် Market က) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလမ်း expropriation မှပျက်စီးခြင်းနှင့်ခဲပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမြို့တော်ဝန် Selahattin Gürkanအဖြစ်လေ့လာမှုဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မှ trips [ပို ... ]
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သော, TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က အထွေထွေမန်နေဂျာဟာဗန်Kapıköyဘူတာများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေ့ Erol Arikan နှင့်အတူသဘောပေါက်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်များအတွက်အကူးအပြောင်းလမ်းကြောင်းကိုအပေါ်Kapıköyအကောက်ခွန်ဂိတ်သို့သွားရောက် [ပို ... ]
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သော, အညွှန်ကြားမှု TCDD Malatya ၏xnumx.bölgသဘောပေါက်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒေသဆိုင်ရာ Entity ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့အညွှန်ကြားမှုအဆောက်အဦးအားလုံးကိုရုံးဝန်ထမ်းရန်အာဏာပိုင်များနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ချက်တင်၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့်အတူတိုင်ပင်၌တွေ့ [ပို ... ]
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသမိုင်း Murat တံတားသင်ပေးခဲ့ဦးမည်
Mus 13 ။ အဆိုပါ Seljuks နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကတည်ဆောက် Murat တံတား၏ရာစုသမိုင်း, ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှရည်ရွယ်သည်။ တရားဝင် website တွင်ဖြန့်ချိမယ့်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည် Mus ဝန်; "ဟုအဆိုပါ Murat မြစ်နှင့် 13 အပေါ်တည်ရှိသည်။ ရာစုနှင့် Seljuks ကတည်ဆောက်ခဲ့သည် [ပို ... ]
အဆင်ပြေပြေနဲ့ Peradze Erzurum ဘူတာနှင့်ပြတိုက်အလည်တစ်ခေါက်
သင့်လျော်သော TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan, တူရကီ-ဂျော်ဂျီယာကျနော်တို့နိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးပြည်ပတင်ပို့ရထားဤမျှနှုတ်ဆက်အခမ်းအနားကိုဘူတာနှင့်ပြတိုက်သွားရောက် Peradz အတူဂျြောဂြီယနျမီးရထားအထွေထွေမန်နေဂျာဒါဝိဒ်သည် Erzurum 23 ဇူလိုင်လ 2019 အင်္ဂါနေ့လည်ပတ်လိမ့်မယ်ပါဝင်သည် [ပို ... ]
အာဇာနည် Fathi Seki စီးတီးဆေးရုံ Access ကိုလမ်းမAsfaltlanıyများမှာ
အလုပ်လမ်းခင်းသည့်ညွှန်ကြားမှုသိပ္ပံရေးရာကတ္တရာ၏အသင်းများအားဖြင့်Elazığမြူနီစီပယ်အာဇာနည်ဗိမာန် Fathi Seki စီးတီးဆေးရုံ access ကိုလမ်းအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံရေးရာအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအပေါ် မူတည်. ကတ္တရာခင်းအလုပ်၏အာဇာနည်နေ့ Conquest Seki စီးတီးဆေးရုံ access ကိုလမ်းအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
အမျိုးသား UMKE လေ့ကျင့်ခန်း Malatya အတွက် Continues
Malatya အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Aydin Baru, ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန, အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများ, ဥရောပနှင့်တူရကီရုံးထံမှအကြီးတန်းဝန်ထမ်းနှင့်အတူအစ္စလာမ္မစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး (OIC) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးထက်ပိုသောနှစ်ဆယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ပြည်နယ်များ 81 ၏အဖွဲ့အထွေထွေညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
Elazig အာဇာနည်ဗိမာန် Fathi Seki စီးတီးဆေးရုံကြီးမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Elazig မြို့တော်ဝန် Sahin ၏Şerifoğul, ရွေးကောက်ပွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆက်လက်မတိုင်မီထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် integrated ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးခေါင်းစဉ်Şerifoğulသည်အာဇာနည်ဗိမာန် Fathi Seki စီးတီးဆေးရုံကြီး၌ရှိသမျှသောရပ်ကွက်အားမိမိညွှန်ကြားချက် [ပို ... ]
ပထမဦးဆုံးပြည်ပတင်ပို့ရထား TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan 23 ဇူလိုင်လ 2019 အင်္ဂါနေ့နှင့်အတူသင့်လျော်သောနှင့်ဂျြောဂြီယနျမီးရထားအထွေထွေမန်နေဂျာဒါဝိဒ်သည် Peradze ပါဝင်မှု, တူရကီနှင့်ဂျော်ဂျီယာတို့အကြားလည်ပတ်ပါလိမ့်မည်, Palandöken Logistic Merkezi'ndegerçekleştirilအခမ်းအနားနှင့်အတူ Erzurum အတွက်ချွတ်ကိုစလှေတျခဲ့သညျ။ သင့်လျော်: "ပို့ကုန် [ပို ... ]
ပထမဦးဆုံးမီးရထားတူရကီနှင့်ဂျော်ဂျီယာတို့အကြားတင်ပို့လမ်းကြောင်းအပေါ်ကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်, နှုတ်ဆက်အခမ်းအနားလေလံဆွဲကြလိမ့်မည် Erzurum Palandökenထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ တူရကီနှင့်အတူဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြားကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုသို့ entry ကိုအတူဘာကူ-Tbilisi-Kars (BTK) မီးရထားလိုင်းအဖြစ်လူသိများသံပိုးလမ်း, [ပို ... ]
Mişmişparkလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဧရိယာဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများ Start ကို
ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဖြစ်ရပ်များအတွက် xnumx.uluslarara Malatya apricot ပွဲတော်နှင့်, ထို Malatya မြူနီစီပယ်အသုံးပြုပုံMişmişparkအဆင်းလှသောအခမဲ့လွန်းဘတ်စ်ကားစည်းရုံးခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပြပွဲဧရိယာမှဝင်ရောက်ခွင့်မဆိုအမှတ်မှာ Malatya မြို့တော်ဝန် Selahattin Gürkan, နိုင်ငံသားများMişmişpark [ပို ... ]
အလုပ်ခွင်ဆန်းစစ်မြောက်ကိုရီးယား Ring ကိုလမ်းမသွားရောက်ခြင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, Malatya သူတို့စီမံကိန်းပြီးစီးရန်လိုအပ်သောအားထုတ်မှုအောင်ကပြောပါတယ်။ Malatya ရဲ့အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်နိုင်ငံရေးသမားများသောအဓိကမြို့ကြီးများနှင့်များစွာသောပြည်နယ်များ၏တဦးတည်းကြီးပြင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် [ပို ... ]
ဝန်ကြီး Turhan: 'မြန်ရထားခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများသည်ကျနော်တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ' '
Malatya အတွက်အများအပြားလာရောက်လည်ပတ်သူစေခြင်းငှါလာကြဝန်ကြီး Turhan, မြောက်ကိုရီးယား Ring ကိုလမ်းမများ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအခါ Turhan နိုင်ငံတော်သမ္မတ Selahattin Gürkanအလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိသော Malatya မြူနီစီပယ်, သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ Turhan, [ပို ... ]
Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center က Crucial မဟာဗျူဟာအမြင်ဖြစ်ပါသည်
ဒေသတွင်းဘဝမှ Project မှသုံးစွဲအတွက်စီးပွားဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အများအတွက်ဘာကူ-Tbilisi-Kars မီးရထားလမ်း Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဖွင့်လှစ်နှင့်အတူတူရကီ။ တူရကီ၏ Serhat Kars မြို့ဒေသအပေါ်တစ်ဦးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာမှထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ 's built အဘယ်မှာ [ပို ... ]
recessed ကိုင်တွယ်ဗန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကစီမံကိန်းဖြစ်!
ဒေသတွင်းနှင့်ဗန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများစီမံကိန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများစေမည်ဖြစ်သောဗန်, တိုင်းပြည်၏အရေးအပါဆုံးမြို့တ, နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူတည်နေရာလူးခဲ့သည်လက်နက်။ ဗန်အပြင်နှစ်ဦးစလုံး jugular စီမံကိန်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အဖြစ်စီးပွားရေးအနေအထားကိုခိုင်မာစေရန် [ပို ... ]
တူရကီခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမများ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center က Be မူမည်
တူရကီခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမများ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာလိမ့်မည်: တူရကီ, ဖုံးလွှမ်းရထားလမ်းစီမံကိန်းအားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး 21 စင်တာတည်ထောင်ခြင်း, အင်္ဂလန်မှတရုတ်ထံမှဆန့်။ ကိုးစင်တာများပြီးစီးခဲ့နေကြတယ်, အာရှနှင့်ဥရောပအကြားပြန်လည်ခံရဖို့ "ကုန်ပစ္စည်းများ2ဒေါ်လာဘီလျံ၏နေ့စဉ်စီးဆင်းမှု၏အခြေစိုက်စခန်းရှိလိမ့်မည် [ပို ... ]
Erzincan Divrigi အကြားRaybüsဒုတိယအတောင်တက်စတင်
Erzincan Divrigi အကြားဒုတိယအကြိမ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဇူလိုင်လ 10 အပေါ်စတင်မည်raybüs။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ပြည်နယ်ဒါရိုက်တာကာဣနန် Aydin, Erzincan Divrigi အတွက်ဒုတိယအကြိမ်raybüsဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထိုနေ့၏အဖြစ်စတင်ပါလိမ့်မယ်, ဇူလိုင်လ 10 ကဆိုသည်။ Raybüsရေကြောင်းခရီးရှည်; [ပို ... ]
ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဖြစ်ရပ်များအတွက် xnumx.uluslarara Malatya apricot ပွဲတော်နှင့်, ထို Malatya မြူနီစီပယ်အသုံးပြုပုံMişmişparkအဆင်းလှသောခိုင်ခိုင်လုံလုံမှဒေသခံဘတ်စ်ကားကစီစဉ်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ 23 နာရီအကြား, ဇားနှုန်းတစ်ခုချင်းစီကိုနာရီ - ဇူလိုင်လနင်္ဂနွေနေ့ကနေ714.00 [ပို ... ]
Kalmar Rough Erzincan အတွက်လမ်းနှင့်ဦးမည်မဟုတ်တော့ကြောကျခငျးလမျးပျေါ
Erzincan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ကိုဖြတ်ပြီးကြမ်းတမ်းလမ်း, အလုပ်လုပ်ရှည်ကြောကျခငျးလမျးပျေါမှာစွန့်ခွာဖို့ရောက်နေပါတယ်။ သိပ္ပံရေးရာ Erzincan မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှုကတ္တရာကတ္တရာအလုပ်အမှုထမ်းကိုလည်းလမ်းများဖျက်ဆီးခံရစဉ်ဖျော်ဖြေ၏ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ပြုပြင်မှုများလုပ်နေတာ။ ထိုဥယျာဉ်များ၏ကိုးကွယ်မှု [ပို ... ]
မီးရထား TCDD မြေပုံ - အမြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်
မီးရထား TCDD မြေပုံ - high resolution: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD သမ္မတနိုင်ငံ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတူရကီသမ္မတနိုင်ငံအတွက်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး operating နှင့်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ထိန်းညှိ။ မီးရထား TCDD ဒီအဖွဲ့အစည်းအဘို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမြေပုံပုံနှိပ် [ပို ... ]
အဆိုပါElazığမြူနီစီပယ်, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကြုံတွေ့ရဖြစ်ကြောင်းလျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများတွင်အသုံးပြုမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကနေကြေညာချက်မှာ, သတင်းများအရထို့ကြောင့်ယာဉ်၏စောင့်ရှောက်မှုခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါElazığမြူနီစီပယ်ဖြင့်ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးကကြေညာချက်တွင်အောက်ပါကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်: "ပုElazığမြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအတွင်းန်ဆောင်မှုများ [ပို ... ]